Ksenia Solovyova: Biography nesithombe
NoKseniya Solovova - intatheli, umhleli oyinhloko we-magazini Tatler imfashini nembangi inkosi yezemidlalo ka ithenisi.
Ebuntwaneni futhi Ezemidlalo
Xenia wazalwa Okthoba 10, 1976 eRussia. Mayelana esengumntwana zesifazane ukusabalala kancane phambili ekukhulumeni kwabezindaba, ngakho lesi sikhathi ukuphila kwakhe ligubuzelwe imfihlakalo. Solovieva uyise wayengumGreki udokotela wesayensi lobuchwepheshe, it is lutho mayelana umama ezaziwayo.
Into kuphela esho etshela Xenia - umdlalo lapho ngesikhathi kudlale indima enkulu ngoba wakhe. Useke wahambela eningi imincintiswano ku ithenisi, hhayi kuphela wamvumela ukuba uthole isimo nembangi inkosi ezemidlalo, kodwa futhi lungadambisa uhlamvu.
Okunjalo abanothando sina ukufundisa esizayo intatheli sokugcina isikhathi, ukudlala kuyanda (ngezinye izikhathi kwakudingeka ukuqoqa ngibe ngiphethe ipotimende nesikhwama Ukhumula imizuzu emihlanu), bese egijimela phambili. Ngalesi Ksenia Solovyova inama namandla athe xaxa okwengamela umsebenzi kanye nekhono elizobhekana. Nakuba-ke manje kusho owesifazane njengoba ingane, wayengumhlali kancane ngesaba ukulala kule izitimela lesibili ekilasini ngihlale enziwa izindawo zokulala.
Kodwa ngisho ijubane enjalo bebangalasa zokuphila awazange ayiphule Xenia, ngaphezu kwalokho, impela isikhathi eside, wazizwa emhlabeni endaweni ephephile futhi engenzeleli. Ngenxa yalokhu, lapho ethola okokuqala ukubhekana ukukhwabanisa, intatheli esizayo ishaqekile eziningi.
Ngemva kokuphothula Faculty of Journalism eMoscow State University. Kenya University Solovyov, ogama Umlando womuntu ophilako kunalokho usithe kuze kube yilo mzuzu, ekugcineni wathatha izinyathelo kuqala emsebenzini eziwukhethile. Waqala uhambo lwakhe "OM" umagazini, lapho yena waphathiswa "Isilawuli". Emantombazaneni ke kuye kwasusa umgoqo omkhulu, ngoba ngaphambili wabhala inothi izincwadi ithenisi. Umsebenzi lo magazini ecwebezelayo Xenia weza ngendlela ethandwa nguye, kodwa lapho ngemva kweminyaka emibili, sekuvele zathola okuhlangenwe nakho, samenyelwa Gala kokuthunyelwe wobuhle umhleli umnyango, yena babengeke benqabe.
Ngakho Ksenia Solovyova nethimba eMoscow wavakashela ukuqeqeshwa Paris. Lapho, bayamangala abasebenzi bendawo okusheshayo intuthuko yalo umsebenzi, ngoba ngaleso sikhathi, ukuze sifinyelele phezulu, amaFulentshi wanikela lonke edition isikhathi. Futhi-ke, Paris "ubuhle" abahleli babe izintokazi phezu 50 ebucayi kakhulu okuhlobene ukubukeka kwabo kukhona.
Ngo-2007, Xenia langena yomnyango iphini umhleli oyinhloko "Tattler" parallel zaveduya umnyuziki umnyango ubuhle. Wahlanganyela kwethulwa umagazini emakethe Russian, ngakho kahle enqotjhiweko izilaleli futhi ihlose ukwenza ngcono umagazini.
Ngu 2010, Ksenia Solovyova usezuze okwandisa, wathola okuthunyelwe ka Umhleli oyinhloko wephephandaba. Kwathatha esikhundleni Victoria Davydova, owayehola elinye iphephabhuku ehlonishwayo. Lokhu izinguquko kwenziwe ngemvume endlini ukushicilela, uMengameli Jacob Zuma uthe Xenia njengoba abasebenzi abanamakhono kakhulu, zazo kancane kakhulu emkhakheni isicwebezelisi.
Umhleli esihle indalo yakhe njengoba incwadi lapho babhala "abantu abantu." Solovyov uziqhenya kakhulu kubo futhi bangaki izindaba baye babatshela lokho, naphezu ukugxekwa narrowness senhlobo kwezinhlamvu. Uyachaza lokhu ngokuthi "Tattler" akatsheli konke "inkanyezi emhlabeni", ngoba kukhona labo ayengeke akuthande ukudalula isimo sabo emakhasini isicwebezelisi.
Xenia njalo unezela into entsha ukuze umagazini, uzama ukubhala mayelana abantu babo bonke ubudala, kuhlanganise nezingane. Kafushane, ukuthuthukiswa salolu shicilelo akagcini ngaphansi kobuholi bakhe, futhi ngangokunokwenzeka umhleli kwenza kube into entsha, ukufinyelela izilaleli ebanzi.
Ukusebenza nabantu abaningi kangaka wenza sikwazi ukuvula Xenia facets ezazingaziwa zokuthambekela kobuntu, kodwa owesifazane uzama ukubheka efanele futhi ukwaba kuphela labo okuyizimfanelo nice wakhe.
Ksenia Solovyova: Biography
Ubudala umhleli we- "Tatler" akekho efihla. Okwamanje, lo wesifazane usuke kakade 40. Wakwazi sifinyelele eziphakeme eside emsebenzini wakhe, nedumela elihle nobuhle, babe ongumama wezingane ezimbili. Ngezindleko zabo Xenia akafuni ukukhulisa kwayo, kungani kwabezindaba ngabo uthola ulwazi oluncane kakhulu. Esikwaziyo ukuthi kuze kube manje ube Solovieva has Indodana yabo eneminyaka engu-17 ubudala, Nikita, ngubani wafundiswa eNgilandi, kanye nendodakazi eneminyaka engu-8 ubudala Sasha.
Mhlawumbe lokhu endaweni umhleli "Tatler" ivikela ekubukeni konke ngokucophelela. Abezindaba neze leaked ulwazi mayelana ngubani umyeni Ksenii Solovovoy. Futhi, naphezu umphakathi, lolu lwazi kusobala ukuthi owesifazane ayikalungi ukudalula esidlangalaleni.
In biography jikelele Solovieva ngokoqobo ukuqoqa izingcezu iphephabhuku izihloko, izingxoxo namavidiyo. Ngakho-ke, ukuba ulwazi olunembile kakhulu kungenziwa kuphela ukuyivala futhi mhlawumbe abalandeli onobudlova, njalo ubukele izibuyekezo izindaba Xenia.
Nokho, abanye abantu bonke ngenxa yegama sowesifazane ngephutha sikholelwe ukuthi umyeni wakhe Dmitri Soloviev. Nokho, skater ayinakho maqondana umhleli "Tattler". Ngaphezu kwalokho, lo dokotela akakaze waba isihloko iqhawe kule magazini. Ngakho izindaba noKseniya Stolbova futhi Dmitri Soloviev sesihlukana neze exhunywe ne umhleli Solovieva.
ukwenza izinto zokuchitha isizungu
Lapha, ngeshwa, futhi lutho ekhethekile ozibongayo. Sebenza futhi indodakazi aphucwe Xenia zonke ngesikhathi sakhe sokuphumula. usuku wakhe iqala ngo 6:30 ekuseni futhi ingahlala kakhulu kuze kube sebusuku, uma kwakukhona umhlangano. Into kuphela ukuthi zisekhona amabutho nezisetshenziswa - lena ithenisi, ke Solovyov akazange alilahle, futhi ngokusobala Akahlosile ukwenza njalo esikhathini esizayo.
Nokho, ukuphila owesifazane akufanele esikhonondayo. "Tatler" s hhayi ukhathele - Xenia uthi, yena akakaze unesizungu emsebenzini. Futhi isikhathi khulula Solovyov esichithwa nokugcinwa mini-blog "Instagrame". Ngokwengxenye enkulu, yena ngokuzinikela umagazini, kodwa ngezinye izikhathi yena usibeka izithombe wakhe futhi wakujabulela eya ukuxhumana abasakazi.
Umthetho kuphela okufanele abe umhleli wawo "Tatler" - hhayi ukubeka imifanekiso yanoma yiluphi nezingokwenyama zomkhaya wakhe. Xenia ikakhulukazi ngokumelene ukubeka izithombe izingane zabo. Ukholelwa ukuthi akudingeki ukuba "njengelanga" ke "Instagrame" futhi uthole i udumo ongafanelwe.
Ngakho, Solovieva ukuphila kungaba ngokuthi egqamile futhi te, nakuba kunzima emoneni - ngoba owesifazane unika ekhuthalele yokuchitha isizungu intandokazi, ngakho ekupheleni kosuku ngokulambisa ezinyaweni zakhe.
Top 10 izinkanyezi abampofu
David Kipiani: Biography nokufeza
Dan Stevens: Biography futhi Filmography umlingisi
Nadezhda Sysoeva: ukuphakama, isisindo, futhi biography of actress 'Gum WESIFAZANE "
Indodakazikazi yindodakazi encane yindoda - inyunyana eqinile
E Krasnaya Polyana: amamenyu, ukubuyekezwa
Kungani ukuphupha ngani iisus hristos? ukuhumusha
5 Isibhedlela (Sokolniki): izithombe kanye nokubuyekeza
Kanjani ukukhiya isiteshi ku "Youtube" kusukela izingane?
"Blue Screen Ukufa!" Yini okumelwe uyenze?
Senna - lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo ngempumelelo izifo eziningi
Amahholo Umhlaba Amazwe
Elizabeth Allende: A Biography, izincwadi